FC-BLZD-I1LRE3W-dyD-B မီးသတ် အရေးပေါ် ဆိုင်းဘုတ် မီးခွက် / dyD-B ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံ မီးလုံးများ
1. ရေနံထုတ်ယူခြင်း၊ ရေနံချက်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ စစ်ဘက်နှင့် အခြားအန္တရာယ်ရှိသောနေရာများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြပြီး ဘေးကင်းသောထွက်ပေါက်ညွှန်ပြချက်၊ အသုံးပြုရန်အတွက် ဘေးကင်းရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန် ညွှန်ကြားချက်များအဖြစ်၊
6. -40 အထက် အပူချိန်နိမ့်သော ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်လျော်သည်။
1. အလူမီနီယမ်အလွိုင်းသေ-ပုံသွန်းခွံ၊ ဖိအားမြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြန်းခြင်း၏မျက်နှာပြင်။
2. တာရှည်ခံသော တောက်ပမှုရှိသော LED အလင်းရင်းမြစ်၊ ပါဝါသုံးစွဲမှုနည်းခြင်း၊ တောက်ပမှုမြင့်မားခြင်း၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးလိုအပ်ချက်များကို ထိထိရောက်ရောက် ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း
3. Built-in ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ Ni-MH ဘက္ထရီ pack၊ ပုံမှန်အလိုအလျောက်အားသွင်းခြင်း၏ပုံမှန်အလုပ်၊ ပါဝါချို့ယွင်းမှုသည် အရေးပေါ်ပါဝါထောက်ပံ့မှု မိနစ် 90 ဖြစ်နိုင်သည်။
4. ပင်ကိုယ်ဘေးကင်းသောဆားကစ်၏ အထူးဒီဇိုင်းဖြင့်၊ အားပိုသွင်းခြင်းကာကွယ်မှု၊ တိုတောင်းသောပတ်လမ်းကာကွယ်မှု၊ over discharge protection နှင့် အခြားသောကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်မှုဖြင့်၊ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိထိရောက်ရောက်အသုံးပြုမှုကို သေချာစေသည်။
5. လစဉ်စစ်ဆေးခြင်း၊ အလိုအလျောက်ထုတ်လွှတ်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်၊ တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်၊ အရေးပေါ်အခြေအနေ၊ 120s ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ ပင်မပါဝါပြည်နယ်၏အလိုအလျောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ဆောင်မှု။
6. နှစ်စဉ်စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်၊ တစ်နှစ်တိုင်းတွင် ပင်မလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြည်နယ်မှ အရေးပေါ်လုပ်ငန်းနှင့် ဆက်တိုက်ဆိုသလို ထုတ်လွှတ်သည့်အခြေအနေသို့ အလိုအလျောက် လွှဲပြောင်းပေးကာ ပင်မဓာတ်အား၏အခြေအနေကို ပြန်လည်ရယူပြီး၊ ပင်မပြည်နယ်၏ အလိုအလျောက် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဖြစ်သည်။
7. ကောင်းမွန်သောကာကွယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိရန် 7. ဒီဇိုင်းဖွဲ့စည်းပုံ၏မြင့်မားသောအကာအကွယ်၊ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကိုဆန့်ကျင်သောဆီလီကွန်ရော်ဘာတံဆိပ်ခတ် gasket ၏ဖွဲ့စည်းပုံ၊
8. အလင်းပုံစံ၊ သာမာန်အလင်းရောင်နှင့် အရေးပေါ်အလင်းရောင်များကို ပုံမှန်ပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ အရေးပေါ်အခြေအနေသို့ အလိုအလျောက်ပြောင်းခြင်း၊ အရေးပေါ်ဘက်ထရီအားကုန်ခြင်း၊ အရေးပေါ်အချိန် မိနစ် 90 ထက်နည်းသော အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ပြသထားသည်။
9. Display panel evacuation signs တွင် ရွေးချယ်ရန် ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်၊ သုံးစွဲသူလိုအပ်ချက်အရလည်း စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
10. ထိတွေ့ထားသော ချိတ်များအားလုံးကို stainless steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
11. သံမဏိ သို့မဟုတ် ကေဘယ်ကြိုး ဝိုင်ယာကြိုး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ပုံမှန်ရွေးချယ်ရန် မော်ဒယ် သက်ရောက်မှု၏ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ၊ မော်ဒယ်၏ သက်ရောက်မှုနောက်ကွယ်တွင် Ex-mark ကို ထည့်သွင်းသင့်သည်။နမူနာပုံစံသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်အတွက် ကုဒ်သက်ရောက်မှု+Ex-အမှတ်အသား။ဥပမာ၊ ဥပမာ၊ ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံမီးလုံးများ လိုအပ်မှု၊ 20 အရေအတွက်၊ ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်မှာ- dyD-B+ Exeib q IIC T6 Gb +20။
ယခင်- dYD စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ(LED) မီးချောင်း
နောက်တစ်ခု: BAD63-A စီးရီး ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော မြင့်မားသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စွမ်းအင်ချွေတာသော LED မီးအိမ်
ပေါက်ကွဲခြင်းအထောက်အထား အရေးပေါ်မီးများ ထွက်ပါ။